Gigi Hadid နဲ့ Bella Hadid ညီအမရဲ့ အကြိုက်တူတဲ့ Fashion များ
25 Jun 2018 . 1:25 PM
Runway တစ်ခုလုံးရဲ့ Angel တွေဖြစ်တဲ့အပြင် Model လောကတစ်ခုလုံးရဲ့ အဟော့ဆုံးညီအမ ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gigi Hadid နဲ့ Bella Hadid ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ အဝတ်အစားတိုင်း Fashion တိုင်းကို ရင်သပ်ရှုမှားအထာကျလွန်းလောက်အောင် ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့သူတွေပါ။
ထသွားထလာပွဲတွေ၊ Party တွေနဲ့ Red Carpet ပေါ်ထိကို သူမတို့ ညီအမ ၂ယောက်ရဲ့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် ခန္ဓာကိုယ်အလှပေါ်က ကြွကြွရွရွ Fashion တွေက ပရိသတ်တွေတိုင်းရဲ့ အာရုံစိုက်မှုအပြည့်အဝရထားသူတွေပါ။
ဒီလို သွေးရင်းသားရင်း ညီအမ ၂ယောက်လုံးဟာ Model လောကမှာ အောင်မြင်မှုတူတူပိုင်ဆိုင်ထားကြသလို ညီအမ ၂ယောက်လုံးရဲ့ Fashion Taste တွေကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်ပဲမို့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူရဲ့ Fashion တွေက ကိုယ့်အကြိုက်ဖြစ်မလဲ? ဘယ်သူ့ Fashion က်ု ပိုကြွေသလဲဆိုတာ ၂ယောက်လုံးရဲ့ Fashion Theme တွေကို တူတူယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) Monochrome ဆန်ဆန် အဖြူနဲ့ နို့နှစ်ရောင်ဖျော့တွေကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ Bella ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်တဲ့ အထာမျိုးနဲ့ Boyish Type မျိုးပေမယ့် Gigi ကတော့ ကျော့ရှင်းသန့်ပြန့် Smart ကျတဲ့ အသွင်ပြင်မျိုးပါ။
(၂) အသားရောင် Nude Shade လေးတွေဝတ်တဲ့အခါမှာလည်း Bella ကတော့ လုံးဝ အထာကျတဲ့ Cool Type ဝတ်ထားပြီး Gigi ကတော့ Off-Shoulder Dress လေးနဲ့ အထက်တန်းဆန်ဆန် ကျော့ကျော့မော့မော့လေးမှ ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။
(၃) Chilling Out လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွတ်လွတ်လပ်လပ် နဲ့ လူအများကြားထဲထင်းနေဖို့ဆို Bella လို Color-blocked Bomber လေးနဲ့ Gigi လို ပန်းဆီရောင် Coat လေးကတော့ ၂ခါပြန်မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်အောင်ပါ။
(၄) Blazer Coat ကို အထာကျကျ Dress အနေနဲ့ ဝတ်တဲ့နေရာမှာလည်း Bella လို Sneaker နဲ့ လန်းမလား? Gigi လို Heels လေးနဲ့ပဲ ကျော့မော့မလား။ ဘယ်လိုဝတ်ဝတ်ကို မိုက်နေမှာတော့ အမှန်ပါ။
(၅) Top to Toe Jeans နဲ့ ဂေါ်လွန်းတဲ့နေရာမှာလည်း Hadid ညီအမကတော့ တကယ့် Pro တွေပါ။ Bella ကတော့ Denim Jeans အသားပေးကိုမှ အပေါ်က Leather Coat နဲ့ ခပ်လန်းလန်းမိုက်နေပြီး Gigi ကတော့ အနီရောင် ဆွယ်တာလေးနဲ့မို့ လူငယ်ဆန်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
(၆) Sexy ဆန်တဲ့ အနီရောင်ကို ဘယ်လိုများ လွင့်နေအောင် ဝတ်လို့ရလဲဆိုတာ ဒီညီအမက ဥပမာပြလိုက်သလိုပါပဲ။ Bella အတွက်တော့ အနီရောင် Turtleneck Dress လေးက Comfy Type ဖြစ်နေသလို Gigi ကတော့ Coat ရယ်၊ Crossbody Bag နဲ့ ဖမ်းစားထားပါတယ်။
(၇) Jeans လား သားမွေးလား ဘယ်သူ့ Crop ကို ပိုကြွေမိနိုင်မလဲ ဝေခွဲမရအောင်ကို ၂ယောက်လုံးက ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လန်းနေတာမျိုးပါ။
(၈) လူတိုင်း Fashion မကျနိုင်တဲ့ Plaid Pants တွေနဲ့တောင် ဂေါ်လွန်းနေတဲ့ ညီအမပါ။
(၉) အဝါရောင်ပိုးသား Dress လေးလား။ ပန်းရောင် ဇာ Dress လေးလား။ တစ်ယောက်တမျိုးဆီ အလှကြွယ်နေတဲ့ ညီအမပါပဲ။
Hadid ညီအမကတော့ ပိန်သွယ်သွယ်၊ ကျော့ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှနဲ့ အလန်းဆုံးဆင်တူ Fashion တွေဝတ်နေကျမို့ ဘယ်သူ့ Fashion က ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ပိုလိုက်ဖက်မလဲဆိုတာ ရွေးချယ်သွားဦးနော်။
Gigi Hadid နဲ့ Bella Hadid ညီအမရဲ့ အကွိုကျတူတဲ့ Fashion မြား
Runway တဈခုလုံးရဲ့ Angel တှဖွေဈတဲ့အပွငျ Model လောကတဈခုလုံးရဲ့ အဟော့ဆုံးညီအမ ၂ယောကျဖွဈတဲ့ Gigi Hadid နဲ့ Bella Hadid ဆိုတာက ခန်ဓာကိုယျပျေါတငျလိုကျတဲ့ အဝတျအစားတိုငျး Fashion တိုငျးကို ရငျသပျရှုမှားအထာကလြှနျးလောကျအောငျ ပွောငျးလဲစနေိုငျတဲ့သူတှပေါ။
ထသှားထလာပှဲတှေ၊ Party တှနေဲ့ Red Carpet ပျေါထိကို သူမတို့ ညီအမ ၂ယောကျရဲ့ ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျ ခန်ဓာကိုယျအလှပျေါက ကွှကွှရှရှ Fashion တှကေ ပရိသတျတှတေိုငျးရဲ့ အာရုံစိုကျမှုအပွညျ့အဝရထားသူတှပေါ။
ဒီလို သှေးရငျးသားရငျး ညီအမ ၂ယောကျလုံးဟာ Model လောကမှာ အောငျမွငျမှုတူတူပိုငျဆိုငျထားကွသလို ညီအမ ၂ယောကျလုံးရဲ့ Fashion Taste တှကေလညျး ခပျဆငျဆငျပဲမို့ ဘယျသူ့ဘယျသူရဲ့ Fashion တှကေ ကိုယျ့အကွိုကျဖွဈမလဲ? ဘယျသူ့ Fashion ကျု ပိုကွှသေလဲဆိုတာ ၂ယောကျလုံးရဲ့ Fashion Theme တှကေို တူတူယှဉျတှဲဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) Monochrome ဆနျဆနျ အဖွူနဲ့ နို့နှဈရောငျဖြော့တှကေို ရှေးခယျြတဲ့နရောမှာ Bella ကတော့ ဘယျသူ့ကိုမှ ဂရုမစိုကျတဲ့ အထာမြိုးနဲ့ Boyish Type မြိုးပမေယျ့ Gigi ကတော့ ကြော့ရှငျးသနျ့ပွနျ့ Smart ကတြဲ့ အသှငျပွငျမြိုးပါ။
(၂) အသားရောငျ Nude Shade လေးတှဝေတျတဲ့အခါမှာလညျး Bella ကတော့ လုံးဝ အထာကတြဲ့ Cool Type ဝတျထားပွီး Gigi ကတော့ Off-Shoulder Dress လေးနဲ့ အထကျတနျးဆနျဆနျ ကြော့ကြော့မော့မော့လေးမှ ကွိုကျတဲ့ပုံစံမြိုးပါ။
(၃) Chilling Out လုပျတဲ့အခါမြိုးတှမှော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လှတျလှတျလပျလပျ နဲ့ လူအမြားကွားထဲထငျးနဖေို့ဆို Bella လို Color-blocked Bomber လေးနဲ့ Gigi လို ပနျးဆီရောငျ Coat လေးကတော့ ၂ခါပွနျမကွညျ့ဘဲ မနနေိုငျအောငျပါ။
(၄) Blazer Coat ကို အထာကကြ Dress အနနေဲ့ ဝတျတဲ့နရောမှာလညျး Bella လို Sneaker နဲ့ လနျးမလား? Gigi လို Heels လေးနဲ့ပဲ ကြော့မော့မလား။ ဘယျလိုဝတျဝတျကို မိုကျနမှောတော့ အမှနျပါ။
(၅) Top to Toe Jeans နဲ့ ဂျေါလှနျးတဲ့နရောမှာလညျး Hadid ညီအမကတော့ တကယျ့ Pro တှပေါ။ Bella ကတော့ Denim Jeans အသားပေးကိုမှ အပျေါက Leather Coat နဲ့ ခပျလနျးလနျးမိုကျနပွေီး Gigi ကတော့ အနီရောငျ ဆှယျတာလေးနဲ့မို့ လူငယျဆနျပွီး ခဈြဖို့ကောငျးနပေါတယျ။
(၆) Sexy ဆနျတဲ့ အနီရောငျကို ဘယျလိုမြား လှငျ့နအေောငျ ဝတျလို့ရလဲဆိုတာ ဒီညီအမက ဥပမာပွလိုကျသလိုပါပဲ။ Bella အတှကျတော့ အနီရောငျ Turtleneck Dress လေးက Comfy Type ဖွဈနသေလို Gigi ကတော့ Coat ရယျ၊ Crossbody Bag နဲ့ ဖမျးစားထားပါတယျ။
(၇) Jeans လား သားမှေးလား ဘယျသူ့ Crop ကို ပိုကွှမေိနိုငျမလဲ ဝခှေဲမရအောငျကို ၂ယောကျလုံးက ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိ လနျးနတောမြိုးပါ။
(၈) လူတိုငျး Fashion မကနြိုငျတဲ့ Plaid Pants တှနေဲ့တောငျ ဂျေါလှနျးနတေဲ့ ညီအမပါ။
(၉) အဝါရောငျပိုးသား Dress လေးလား။ ပနျးရောငျ ဇာ Dress လေးလား။ တဈယောကျတမြိုးဆီ အလှကွှယျနတေဲ့ ညီအမပါပဲ။
Hadid ညီအမကတော့ ပိနျသှယျသှယျ၊ ကြော့ရှငျးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအလှနဲ့ အလနျးဆုံးဆငျတူ Fashion တှဝေတျနကေမြို့ ဘယျသူ့ Fashion က ကိုယျ့အကွိုကျနဲ့ ပိုလိုကျဖကျမလဲဆိုတာ ရှေးခယျြသှားဦးနျော။